धर्म – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : गर्भवती महिलाले स्वास्थ्यको निकै ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ। जसमध्ये वास्तुमा बताइएका केही बस्नु उनीहरुका लागि बरदान बन्न सक्छन्।वास्तुका अनुसार यदी कुनै महिलाले कुनै खास चीज कोठामा राख्दा महिला र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्ने र बच्चा गुणवान हुने गर्दछन्। मयूरको प्वाख मयूरको प्वाख कृष्णसँग सम्बन्धीत हुने गर्दछ। त्यसैले यसलाई घरको मन्दिर वा गर्भवती महिलाले कोठामा राख्दा आमा र बच्चाका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। पहेलो चामल पहेलो चामलले शुभ शंकेत बताउने गर्दछ। त्यसैले गर्भवती महिलाले कोठामा पहेलो चामल राख्दा आमा र बच्चामा कुनै किसिमको नकारात्मक उर्जा नपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। भगवान कृष्ण र देवी यशोदाको तस्वीर गर्भवती महिलाले कोठामा भगवान कृष्ण र देवी यशोदाको तस्वीर लगाउनु शुभ मानिन्छ। यसरी लगाएको तस्वीर विहान उठ्ने वित्तिकै देखियो भने सकारात्मक उर्जा प्राप
Sapana Sanjal : श्रीलंकाका अधिकारीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो निलमको एक क्लस्टर (समूह) फेला परेको जनाएका छन् । रत्नसम्बन्धी व्यापारीका अनुसार उक्त निलम ती व्यक्तिको आँगनमा इनार खन्ने क्रममा मजदुरहरूले फेला पारेका हुन् । यो घटना श्रीलंकाको रत्नपुराको रहेको बीबीसीले जनाएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार सो क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा रत्नहरू रहेका छन् । विज्ञहरूले ५१० किलोग्रामको उक्त नीलमणिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अहिले १० करोड डलर (११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) रहेको बताएका छन्। उक्त निलमको तौल ५१० किलो रहेको छ । र, उक्त निलमलाई सेरेन्डिपिटी सफायर (भाग्यले मिलेको हिरा) नाम दिइएको छ । बीबीसीका अनुसार उक्त निलम भेटिएको घरका मालिकले बताएका छन्- इनार खनीरहेका व्यक्तिहरूले केही दुर्लभ रत्न भेटिने सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए । र, खन्ने क्रममा उक्त विशाल हिरा भेट्टिएको हो । सुरक्षाका कारण देखाउँदै
Sapana Sanjal : धर्मशास्त्रमा जीवनका नियमहरु उल्लेख छन् । त्यसमा दारी र कपाल काट्न नहुने दिन समेत उल्लेख छ । यी दिनमा दारी कपाल काट्दा अशुभ हुने मानिन्छ । यी दिनमा नकाट्नुस् कपाल शास्त्रका अनुसार । मंगलवार, विहीवार र शनिवार : मंगलवार, विहीवार र शनिवार कपाल काट्नु हुँदैन । यसले अशुभ गराउने विश्वास छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार पनि मंगलबार मंगलको दिन हो । शरीरमा पनि मंगलको निवाश हुने यो दिनमा कपाल काट्नु राम्रो मानिन्छ । मंगलबार र शनिबार कपाल काट्दा अशुभ प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । शास्त्रका अनुसार मंगलबार कपाल काट्दा ८ महिना कम हुन्छ मान्छेको आयु विहीबार लक्ष्मीको दिन मानिन्छ । यस दिन कपाल काट्दा लक्ष्मी अर्थात धनकी देवी बेखुसी भएर दरिद्र हुने सम्भावना हुन्छ । शनिबार कपाल काट्दा ७ महिना आयु कम हुने विश्वास गरिन्छ । बाँकि रहेका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार र आइतवार कपाल काट्नु राम्र
नौ लाख ब’लेको ब’त्तिलाई द’र्शन गर्नुहोस र ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस, तपाईको मनोकामना पूरा हुनेछ। आफु कसरि ध’नि बन्न सकिन्छ पुरा पढ्नुहोला
Sapana Sanjal : ध’नकि खानी,ध’नको देवी मानिने लक्ष्मी मातालाई प्र’सन्न गर्नको लागि मा’निसहरु अनेक प्रकारको उपाय र कार्यहरु गर्ने गर्दछन् ।महालक्ष्मीको पूजा र आ’राधना गर्नाले धन र स’मृद्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत रहेको छ ।हिन्दु धर्मअनुसार, यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी राख्न र उनलाई आफ्नो घरमा आ’कर्षित गर्न सक्ष’म हुनुभयो भने धन र स’मृद्धिले तपाइलाई कहिले पनि छोड्ने छैन ।देवी लक्ष्मी धन, भा’ग्य, प्रे’म र सौ’न्दर्यकी देवीको रुपमा मानिन्छ। उनलाई चं’चल स्व’भावको पनि मानिन्छ किनकि उनि एकै ठाउँमा स्थायी रुपमा बस्न सक्दिनन् भन्ने वि’श्वास पनि रहेको छ । तपाईले दैनिक गर्ने केही कार्यहरुले लक्ष्मी माता प्र’सन्न हुने र जीवनमा प्र’शस्त ध’नलाभ गर्ने अवसर मिल्ने गर्छ। आज हामी तपाईहरुलाई ल’क्ष्मीको कृपा मिल्ने र ध’नलाभ हुने ५ सं’केतहरु बताऊन जाँदै छौँ। १. यदि तपाईले सपनामा पानी, हरियाली र लक्ष्मी
Sapana Sanjal : सामान्यतया सर्प देखेपछि मानिसहरु डराउँछन् । तर, हालै भारतमा एक अनौठो खालको सर्प देखिएपछि हेर्ने मानिसहरुको भीड लागेको छ ।भारतको कर्नाटकस्थित होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प फेला परेको हो । जसको टाउँकोमा सुनौलो रंगको प्रकाश चम्किन्थ्यो । सर्पको शीʼरमा प्रकाश चम्किएपछि नाग देʼवता भन्दै सʼर्पको पूजाआजा गर्ने मानिसको भीड लागेको थियो ।समाचारका अनुसार होलमाकी गाउँका एक स्थानीयको कुकुर खेतमा गएर अचानक भुक्न थाल्यो। त्यो देखेर मानिसहरु त्यहाँ पुगे । त्यहाँ पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुले कोब्रा जातको अनौठो सर्प देखे । तर, सर्प विशेषज्ञका अनुसार त्यहाँ कुनै चमत्कारी नभएको बताʼएका छन् ।पर्वत – पर्वतमा पहिलो पटक भेटिएको दुर्लभ वन्यजन्तु किङ कोब्रा अर्थात् कालीनागलाई संरक्षण क्षेत्रमा लगिएको छ ।कुश्मा नगरपालिका वडा नं १० पीपलटारीस्थित सिमखेतमा गत शनिबार भेटिएको सर्प सर्प संरक्षक
Sapana Sanjal : काठमाडौं बाङ्गेमुढास्थित ओलाछी टोलमा रहेको गणेश मन्दिर पुन निमार्णका क्रममा पुरानो ढुङ्गाको गणेशको मूर्ति फेला परेको छ ।मन्दिर पूनर्निर्माणका क्रममा पित्तलको गणेशको मुर्ति उप्काउंदा पछाडि ढुगांको करिब पाँच सय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला परेको होअसावधानीका कारण उक्त मूर्ति भने टुक्रिएको छ ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला** टुक्रिएको मूर्ति पुरातत्व विभागको सहयोगमा जोड्न लागेको स्थानीय कृष्णप्रसाद मानन्धरले बताए । हजुरबुबा तुलसी नारायण माननधरले २०२२ साल तिर न्यास पूजा गरि ढुगांको पुरानो मुर्ति माथि पितलको गणेशको मुर्ति स्थापना गरेको उहांको भनाइ छ । फेला परेको गणेशको मुर्ति दुई हाते हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आइतबार : पुरुष : आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बा
Sapana Sanjal : भनिन्छ हिन्दु धर्ममा भगवा’न शिवको महिमा अपरम्पार छ । शिव हिन्दू धर्मका प्रमुख दे’वताहरू मध्येका एक हुन् महादेव । महादेव, परमेश्वर आदि नामले चिनिने भगवान् शिवलाई प्रायःजसो शिवलि’ङ्गको रूपमा पूजा गर्ने ग_रिन्छ। चाडै नै प्रसन्न हुने भएकोले भोले बाबाको नामले परिचित शिव भगवान्लाई मनपर्ने महि’ना साउन र मनपर्ने बार हो सोमबार । उनको पुजा गर्न साना साना नियम पा’लन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । भगवान शिव’को पुजा गर्दा गल्तीले पनि शंख बजाउन नहुने शिव पुराणमा उल्लेख छ । शिवजीको पूजामा शंख’को प्रयोग गर्न नमिल्ने कारण निकै रोचक छ । दैत्यराज दम्भले केहि वर्षसम्म भगवान विष्णुको कठिन त’पस्या गरेर तीन लोकका लागि अजय र महापराक्रमी छोराको वरदान मागेपछि शिवजीले उक्त वरदा’न पूरा गरिदिए । दैत्यराज दम्भका छोरा थिए शंख’चुड । उनको अत्यचारबाट सबैजना अत्तालिएका थिए । शिवको यो निर्णयबाट भगवान्ह’रुपनि खुशी
Sapana Sanjal : नेपालको गण्डकी प्रदेश, तनहुँ जिल्ला म्याग्दे गाउँपालिका ३, किलचोकमा अवस्थित श्री अकला देवीमा रहेको मुर्ति बनावटी नभई त्यही रहेको शीलामा शिंह र नन्दीको आकृति रहेको छ । मन्दिर भित्र भएको विशाल शीलालेखलाई नै आद्यशक्तिको रुपमा परापुर्ब देखिनै स्थानीय आदिबासी मगर जातिहरुले कुलायन देवीको रुपमा पुजा गर्दै पछी सबै जातजातिले अकलादेवीको नामले पूजा गर्दै आएको छ । दैबिशक्ति : मन्दिरमा भएको बिशाल शिला पुन निर्माणको चरणमा जग राख्ने बेला शिला लगभग १० फिट तल खन्दा पनि शिला नह्ल्लनु ,शिलामा ३३ कोटी देवताको आकार हुनु , अकला मन्दिरमा रातिको समयमा मन्दिर परिसरमा शंखघण्ट बज्ने , दिनमा भक्तजनहरु दर्शन गर्न आउँदा मन्दिर परिसरमा रहेका घण्ट आफै हल्लिने, बाह्रै महिना कटहर फल्ने , अकला मन्दिर नजिकै रहेको अर्धनारेश्वर रुद्र देवी मन्दिरको विशाल शीलाखण्ड जो कोहीले पनि हल्लाउन सक्ने ,सिलामा धेरै रुपहर
Sapana Sanjal : सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरु
Sapana Sanjal : शास्त्र भन्छ ‘दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ ।’ रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । । हनुमान चालिसा। हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ । फलामको उपकरण । सुत्ने बेला सिरानी मुनी फलामको उपकरण राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । वालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण चलेको हो । मुला। सिरानी मुनी मुला राखेर सुत